संसद सचिवालयको त्रुटिले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन एक बर्षअघि ! – YesKathmandu.com
संसद सचिवालयको त्रुटिले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन एक बर्षअघि !
काठमाडौं । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले बहुमतिय सरकार गठनको आह्वान गरेलगतै बसेको ब्यवस्थापिका संसद बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले १९ साउन २०७३ मा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिन । तर संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकामा भने त्रृटि फेला परेको छ ।
संसद सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन १९ साउन २०७२ मा गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ । एक बर्ष पुरानो कार्यतालिका त्रृटिका कारण सार्वजनिक भएको छ । २०७३ साल साउन १९ हुनुपर्नेमा कार्यतालिका २०७२ साल साउन १९ भएको छ ।
तर कार्यतालिकामा उम्मेद्धारी दिने मिति पनि तय गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्धारी दिने मिति भने २०७३ साल साउन १८ गते उल्लेख गरिएको छ ।
प्रचण्डलाई काउन्टर दिन सुवास नेम्वाङ मैदानमा
मुक्तियोद्धाको जन्मजयन्तीमा काव्यसभा
यी हुन लोकमानको बचाउमा उभिएकी माओवादीको एक्ली सांसद
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करिब २१ हजार मतदान केन्द्र
संविधान घोषणाको वदला एमालेसंग लिन केही तत्व सक्रियः ओली
बलात्कृत किशोरीको परिवार बसाइँ सर्ने
३६ दललाई तीन महिनाभित्र महाधिबेशन गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन
बरु गोली हानेको भएँ एकै पटक मर्ने थिएँ, घडी चोरको आरोपले जीवनभर मर्ने भएँ–कांग्रेस नेता रामहरी खतिवडा
हुल बाँधेर बालुवाटार पुगेका मोर्चाले प्रधानमन्त्रीसँग यी कुरामा गर्र्यो ‘बार्गेनिङ’